Maxaad ka taqaan diyuuradaha Is-wada “Drones” ee loo adeegsado hawlgalada ciidan – SBC
Maxaad ka taqaan diyuuradaha Is-wada “Drones” ee loo adeegsado hawlgalada ciidan
( DHAGEYSO ) Kow iyo tobon sano ka hor bishan February waxaa ka kacdey saldhig ciidan oo Mareykanku ku leeyahay gobolka buuraleyda ah ee Galbeedka wadanka Mareykanka diyaarad yar oo aan duuliye laheyn, waxaana duqeyn tijaabo ah u geysatey Taangi ay iska lahaayeen ciidamada Maryekanka kaasi oo aanay cidina saarneyn, ujeedaduna ay aheyd oo kaliya hawlgal tijaabo.
Hawgalkaasi tijaabada ah ee sanadkii 2001-dii ka dhacay saldhigaasi waxaa maamulayey oo kaliya laba duuliye oo aan diyaaradaasi oogadeeda saarneyn balse qol ku dhex yaal saldhigaasi oo lagu magacaabo control room ama qolka maamulka ka hagayey diyaaradaasi.
Taasi waxay aheyd tijaabo najaxdey oo ciidamada Mareykanku ku doonayeen inay ku helaan wadiiqo ay ku qaadi karaan weerar xaga cirka ah ama sahan sirdoon iyadoon aalada cirka mareysa aanay cid bini’aadam ah saarneyn, waxaana xiligaasi si buuxda loogu guuleystey gantaalkii tijaabada ahaa taasi oo ka dhigan in dagaalka casriga ah ay ku biireen diyuuradaha is-wada ama duuliye la’aanta ah.
Dayuuradahan ayaa isagu jira laba nooc oo kala duwan oo kala kuwa aan hubeysneyn oo loogu tala galay in ciidamadu kula socdaan dhaqdhaqaaqa goobaha ay bartilmaameysanayaan, hawlaha sirdoonka iyo waliba taageerida hawlgalka dagaal ee socda & kuwa hubaysan oo kaligood hawlgal fuliya hawlgal.
Sadex todobaadka ka hor Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu markii ugu horeysay uu qiray adeegsiga diyaaradaha Is-wada oo hawlgal xaga cirka ah ka fulisay dhulka qabaa’ilku ku xoogan yahay ee dalka Pakistan taasi oo lagu beegsadey deegaano looga shakisan yahay in Al-qaacida xubno ka tirsan ay ku sugan yihiin, taasi waxay meesha ka saartey dafiraad saraakiisha Mareykanka mudo ku andacoonayeen oo ku aadaneyd adeegsiga diyaaradaasi oo lagu fuliyo duqeyn xaga cirka ah tan iyo sanadkii 2004-tii.
Meelaha sida aadka ah loogu adeegsado diyaaradaha Is-wada ayaa waxaa ka mid ah Pakistan, Afgaanistaan, Yemen & Soomaaliya, iyadoo Washington bartilmaameysanayso saraakiisha Al-qaacida iyo xoogaga kale ee Islaamiyiinta.
Maalmihii tagey saraakiisha Pakistan waxay sheegeen laba duqeyn oo xaga cirka ah in Mareykanku ku dileen 21 qof oo looga shakisan yahay kooxaha mayalka adag ee dalkaasi.
Sidoo kale Soomaaliya ayaa laga soo sheegay in dhawaan gobolka Shabeelaha hoose lagu diley nin ka mid ahaa Al-Qaacidada bariga Afrika kaasi oo ku dhintey duqeyn ka dhacdey gobolka Shabeelaha Hoose.
Warar dhanka mukhaabaraadka laga helayo ayaa sheegaya in diyaaradaasi ay haatan hawlo firfircoon ka hayaan dalka Siiriya oo ay isha ku hayaan rabshaha wadankaasi ka aloosan.
cSanadkii la soo dhaafay ee 2011 qabashadii iyo dilkii Osama Bin Ladin hogaamiyihii Al-Qaacida & Mucamar Al-Qadaafi hogaamiyihii Liibiya waxaa la xaqiijiyey xogta lagu helay goobaha ay ku sugnaayeen inay kaalin weyn ay ku lahaayeen diyaaradahaasi Is-wada.
Dalka Yemen oo ay ka aloosnaayeen xiisado colaadeed mudooyinkii la soo dhaafay , waxaa qulqulatooyinkaasi ku lamaansanaa hawgalka Al-Qaacidada Jasiirada Carabta ee loo yaqaan AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) oo dalkaasi si caaboon uga hawlgasha, waxaase duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Is-wada lagu diley mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan hawlgalka Al-Qaacida ee dalalka Carabta kaalin weyna ku lahaa abaabulka weerarada ka dhanka Mareykanka & Yurub ninkaasi oo lagu magacaabi jirey Anwar al-Awlaki.
Laakiin xeeldheerayaasha dhanka military-ga ayaa ku doodaya in sodonkii sano ee la soo dhaafay la adeegsan jirey diyaaradaha Is-wada balse ay ku koobanaayeen hawlaha dhanka sirdoonka, waxaana arintan in si kale loo badalo ay ka dhalatey jawaabta weerarkii
September 11, sida uu ku doodayo Peter Singer oo ka tirsan machadka Brookings ee magaalada Washington.
Noel Sharkey, oo ah professor arimaha robot-ka ku xeeldheer kana tirsan Jaamacada Sheffield ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in 51 wadan ay haatan adeegsanayaan diyaaradaha Is-wada, iyadoo ay sii kordhayaan tan iyo sanakdii 2001-dii.
Hadaba diyaaradahan sidee u shaqeeyaan ?
Diyaaradahan oo sidoo kale loo yaqaan Diyaaradaha aan la saarneyn waxay kaga duwan yihiin diyaaradaha kale ee caadiga ah ee duuliyuhu oogada u saaran yahay inay hawada ku jiri karaan mudo ka badan 24 saacadood iyadoo xog muhiim ah u qabta ciidamada dhulka ama saldhigyada jooga waana taasi mida loogu aqoonsadey in ciidamadu ugu yeeraan “Indho cirka u jooga 24-ka saac”.
Diyaaradan waxay u sameysan tahay qaab ka duwan diyaaradaha kale, gafuurka hore waxay ku leedahay dareemayaal (Kaamiro duubaysa sawir cadaan ama madow aha), Raadaar qalabka, dhulka, xawayaanka iyo bini’aadamka kala saaraya, qalab iftiin ka dhigaya sawirada xiliga cimiladu xun tahay ama xaalad xun lagu qaado.
Sidoo kale diyaaradan waxaa la saari karaa gantaal lagu hago qalabka laser-ka, kaasi oo loogu tala galay bartilmaameysiga goobaha la weerarayo.
Inkastoo diyaaradahan aanu duuliye(pilot) saarenyn hadana ma ahan inay kaligood qabtaan shaqooyinka oo dhan, waxaa dhulka ka maamulaya shaqaale loo tababarey hagida iyo hawlgalinta dayuuradahan kuwaasi oo ka hagaya saldhiga ay ka duulaan ama ay ku soo degaan, waxaase dhici karta in diyaaradahaasi laga hago saldhig ka fog halka ay ka hawlgalayso una jira masaafo ka badan kumanyaal mayl, tusaale ahaan kuwa haatan ka hawlgala dalka Afgaansitan waxaa laga hagaa saldhiga Creach ee ku yaal gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, walow duulista iyo dajinta laga maamuli karo meel aan ka fogeyn halka ay ka hawlgalayaan, arimahan waxaa suurtagal ka dhigaya isku xirnaan dhanka dayax gacmeedka (Satellite-ka) oo ah kan isku nigaxaya dayuurada iyo qolka laga hagayo.
Ujeedada arintan laga leeyahay ayaa ah in laga maarmo diyaaradaha duuliyuhu saaran yahay si khasaaraha loo yareeyo, loona adeegsado awooda technology-yada casriga ah.
Ma ahan guul kaliya inay soo hoyaan diyaaradahan ee waxaa kal oo ay keenaan waji gabax iyo ceeb dhanka ciidamada iyo siyaasadaba soo gaarta, waana tan marka ay dhacdo inay hareer marto yoolkii bartilmaameedka oo ay beegsato bulsho nabad ku naaloonaysa oo ay balaayo iyo bul ka kiciso, taasi oo noqotey boog wajiga kaga taal mudooyinkii ugu dambeeyey xukuumada Washington oo si aad ah u adeegsanaysa dayuuradahan.
Dalalka Afgaanistaan & Pakistan tiro ka dhawr ayey gantaaladaha diyaaradahan laga hago waxay ku habsadeen dad rayid ah, iyadoo arintaasi keentey in looga hadlo fagaarayaasha caalamiga ah sida warbixin ay soo saartey hay’ada qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee fadhigeeda yahay magaalada Geneva oo ku tilmaamtey mid sharci daro ah adeegsiga diyaaradahaasi oo Mareykanku u adeegsado dalka Pakistan.
Soomaaliya oo sadexdii sano ee la soo dhaafay Mareykanku diyaaradahan u adeedsaday dagaalkiisa ka dhanka ah kooxaha Al-Qaacida taabacsan ayaa ceeb badan ka dhalatey ka dib markii diyaaradahaasi duqeeyeen goobo dad rayid ah ku sugnaayeen iyo waliba qaarkood oo dhulka ku soo dhacay cilado farsamo awgood.
Laakiin ujeedada ugu weyn ee Mareykanka iyo dalalka kale ee haatan adeegsanaya diyaaradahan ayaa ah inay ku yareeyaan qatarta ku imaan karta shakhsiyaadkooda isla markaana looga faa’ideysto technology-da xiligan aduunku ku socdo.
Tan labaadna waa diyaaradahan qiimahooda oo aad uga yar kuwa caadiga ah ee military ahaan xiligan loo adeegsado, tusaale ahaan diyaarada aan la saarneyn ee Drones-ka loo yaqaan qiimo ahaan kama badna 2 milyan oo doolar.
Dawlada Pakistan ayaa shaacisay qiyaas sanadkii 2011 ay ku sheegtey in 1-dii January 2009 ilaa December 31 2009 diyaaradaha Mareykanka ee duuliye la’aanta ah ay dileen 700 oo qof oo rayid ah kuwaasi oo aan waxba galabsan.
Laakiin website-ka PakistanBodyCount.Org ee uu maareeyo Zeeshan-ul-hassan Usmani oo ah aqoonyahan ka tirsan Florida Institute of Technology wuxuu qorey in 1065 dad Shacab ah ay ku dhinteen duqeymaha diyaaradahaasi intii u dhaxaysay June 2004 ilaa January 30, 2010, iyadoo 103 duqeyn ay fuliyeen Mareykanku xiligaasi.
Wargeyska afka dheer ee The International News ee Pakistan laga leeyahay qaybtiisa Internet-ka wuxuu daabacay in bishii January 2010 ay aheyd bishii ugu dhimashada badneyd duqeynta diyaaradaha duuliye la’aanta Mareykanka taasi oo ay ka dhigteen 123 qof, waxaa kale oo ka mid dhimashada laga soo sheegayo duqeyntaasi in 160 caruur ay ku dhinteen halka 1000 qof ay ku dhaawacmeen.
MOHAMUD BABAN GIIDA says:
Waa lawada ogyahay in US Goverment ay dagaal xun kula jirto Muslimiinta caalamka oo dhan,
Alqacidana maahan wax jira ee share weeye Dowlada Us.
waa niman diinta majara habaabiyey oo wada shaqeyn wacan kadhaxeyso mareykanka.
Alshabab xaataa waxay wada shaqeyn ka dhaxeysaa Brack Obama.
cali nuur says:
marekan awoodiisu waa tii fircoon oo kale.cajab!!!